‘राजनीतिक निकास दिने काममा अवरोध र्पुयाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दललाई सुहाउदैन्’::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
‘राजनीतिक निकास दिने काममा अवरोध र्पुयाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दललाई सुहाउदैन्’
नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक निकास दिने काममा अवरोध र्पुयाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दललाई नसुहाउने बताएका छन् ।
आईतबार सप्तरीमा बुद्धिजिवी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा उनले संसद अवरुद्ध गर्ने्तिर नलागि सहमतिका साथ अघि बढ्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशितालगायतका विषय सुरक्षित गर्न पनि वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
भट्टराईले पहिले प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र नमिलेका कुरा क्रमशः संशोधन गरी अघि बढ्न सबै दललाई आग्रह गरे । संघीयताको नमिलेको विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत् मिलाउन सकिने भन्दै उनले संसदको अवरोध हटाउन एमालेका नेताहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रचण्ड समक्ष यस्तो नयाँ प्रस्ताव लिएर जाँदै एमाले, मान्लान् त प्रचण्डले ?
अन्तत : प्रचण्डले चितवन पुगेर मुख खोले, के होला नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता
यस्तो थियो स्व कोइरालाको भारतलाई झापड, युवा कांग्रेसीले जानून “सबै मधेसी दलहरू बाम कम्युनिस्ट हुन ।”
स्वराजलाई नभेट्न नारायणकाजीले दिए ओलीलाई चेतावनी, अन्यथा बाम गठबन्धन भत्किने
वाम गठबन्धनको घमण्डप्रति सिंहले दिए काउन्टर जवाफ, ओली र प्रचण्डलाई हुने भयो समस्या !
बहुचर्चित कांग्रेश नेताहरु सडकमा बसेर बुट पालिस गर्न थालेपछि, सर्बसाधारण चकित !